कति खर्च भयो प्रधानमन्त्री ओलीकाे स्वदेशमै गरिएको उपचारमा ?::Hamrodamak.com
कति खर्च भयो प्रधानमन्त्री ओलीकाे स्वदेशमै गरिएको उपचारमा ?
भाइरल ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत सोमबार मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएको थियो ।
काठमाडाैं। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५ दिन अस्पताल बसाईपछि स्वस्थ भएर फर्किनु भएको छ ।
नेपालमै गरिएको उपचारमा मात्र ३६ हजार लागेको छ । जुन खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । भाइरल ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत सोमबार मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएको थियो ।
५ दिन अस्पतालको सीसीयुमा बसेर उपचार गराउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार ३६ हजारमा भएको छ । अस्पतालले प्रधानमन्त्री सामान्य अवस्थामा रहेको भन्दै उँहालाई डिस्चार्ज गरेको छ । यस अघि सधै थाइल्याण्ड जाने प्रधानमन्त्रीको एक पटक थाइल्याण्ड उपचारमा जाँदा कम्तिमा पनि १० लाख खर्च हुने गरेको रेकर्ड छ । तर यो पटक स्वदेशमा उपचार गराउदा आर्थिक भार आधा लाख पनि पुगेको छैन भने उहाँले अस्पतालबाटै काम गर्दै बिशेष उपचार पनि पाइरहनु भएको छ ।